Kumbindi wesixeko esinembali kunye nolwandle olukude ngeemitha eziyi-150 - I-Airbnb
Kumbindi wesixeko esinembali kunye nolwandle olukude ngeemitha eziyi-150
Istudiyo esiyi-28 esisembindini wedolophu endala enembali,
- ngaphantsi kwe-150M ukusuka elunxwemeni,
- 100m ukusuka kwindawo yokungena kwi-rampart ejongene neBay of St
Malo - kunye ne-30M ukusuka kwisitrato esikhulu sokuthenga.
Ilungele umntu omnye okanye abantu abathandanayo abanomntwana okanye umfana.
Ikufutshane neevenkile zokutyela ezinexabiso elihle kakhulu lemali.
Iqaqambe kakhulu, ibonakala kwiMpuma-West.
Indawo efanelekileyo yokuhamba ngeenyawo okanye ngesikhephe.
- Ukuqeshiswa kwamaxesha athile onyaka kweflethi okanye indlu ekwicomplex e-Saint Malo intra-muros, embindini wesixeko esidala.
- Le flethi iphawulwe ngeenkwenkwezi eziyi-2 kuluhlu lwezokhenketho ezinefenitshala yikomiti yesebe lezokhenketho
- I-intanethi ye-wifi iyafumaneka.
- Esi situdiyo se-28 m2, sivele empuma/entshona sithule kwaye sikhanya kakhulu. Isitrato esikhulu sokuthenga singaphantsi kwe-30M, unxweme lwe-150M (ifoto) kunye nokufikelela kwi-rampart ngaselwandle 100m.
- Ilungiswe ngokupheleleyo, igcinwa kakuhle.
Izinto zebhedi (amashiti, iitawuli) zinganikezelwa nge- € 15 eyongezelelekileyo kwibhedi yokuqala kunye ne- € 10 ye-2.
- Ibhedi yeambrela (engenawo amashiti) inokunikezelwa (ngaphandle kokubhataliswa enye imali).
- Amaxabiso aquka zonke iimali ezibhatalwayo.
- Azivumelekanga izilwanyana zasekhaya.
Isipho esincinci sokwamkela
sikulindile. - Ikhitshi eline-induction hob.
- Igumbi lokuhlala (eliseNtshona) : umphantsi owenziwe ngekhephu, ibhedi ekwayisofa ekumgangatho ophezulu (eMobilier de France
) - Iradiyetha eyomileyo yegumbi inertia yenza kube tofotofo kakhulu ukufudumeza.
- Igumbi lokuhlambela (elisempuma) line-radiator "yokomisa iitawuli". Indlu yangasese eyahlukileyo.
Zifumaneka kwiindawo ezininzi zokuhamba: iilwandle, iivenkile, iindawo eziphakamileyo ezineendawo ezininzi onokuzibona (iSixeko saseAleth, iFort yeSizwe,...), izibuko eziya kwitheku laseSt Malo okanye kwiziqithi zeChannel eJersey, eGuernsey...
4.94 · Izimvo eziyi-101
I-Intra muros inomtsalane wokuziva ukwindawo ekhuselekileyo, kwilali enqabileyo apho ingcamango yexesha ingasafaneleki.
Ukuba uza ngemoto, uza kuyilibala kakhulu. Nantoni na enokwenziwa uhamba ngeenyawo.
Ukutyelela oomasipala abamelwane, isikhephe okanye ibhasi ikuvumela ukuba uye apho.
Ngexesha lokubonisa iflethi okanye indlu ekwicomplex, ndiza kubonisa izinto ezibonisa ukuba:
- ukutyelela iSt Malo kunye neendawo ezijikelezileyo,
- kwiivenkile zokutyela.
Inombolo yomthetho: 35288000395BF
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Saint-Malo